यस्ता छन् उच्चस्तरीय समितिले आज गरेका निर्णयहरु ! — Arthatantra.com
Arthatantra.com > मुख्य समाचार > यस्ता छन् उच्चस्तरीय समितिले आज गरेका निर्णयहरु !
यस्ता छन् उच्चस्तरीय समितिले आज गरेका निर्णयहरु !
काठमाडौँ । सरकारले आन्तरिक हवाइ उडान वैशाख १८ गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले उडान रोक्ने निर्णयलाई थप १५ दिन लम्ब्याएको हो ।
यसअघिको निर्णय अनुसार वैशाख ३ गतेसम्म उडान रोकिएको थिए । सरकारले अन्तराष्ट्रिय हवाइ उडानलाई वैशाख १८ गतेसम्म रोक्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
समितिले आपूर्तिलाई सहज राख्ने तथा सुरक्षालाई समन्वय गरेर अगाडी लैजाने निर्णय गरेको छ । समितिले राहात पाउने भनेर छुट्टयाईएकाहरुलाई बस्तुगत रुपमा राहत उपलब्ध गराउने निर्णय समितिका सदस्य सचिव नारायण विडारीले जानकारी दिए ।
साथै समितिले लकडाउन कडा बनाउने र उलंघन गर्नेलाई कानुन अनुसार जेल सजायसम्म गर्न निर्णय गरेको छ । त्यस्तै अफगानिस्तानमा यूएन अन्तर्गत काम गरिरहेका नेपाली नागरिकहरुलाई उद्दार गर्ने निर्णय गरेको छ । विडारीले युएनले नै उद्धार गर्न अनुरोध गरेकाले यो निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन् ।
समितिले परिक्षण, पहिचान र उपचार जोड दिने निर्णय गर्दै कोरोना फैलिन नदिने निर्णय गरेको छ । साथै स्वास्थ्य सामग्री खरीद प्रक्रियालाई निजी क्षेत्रले ल्याउने सामाग्रीलाई सहजीकरण गर्ने स्वास्थ्य बिभागले खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाउने तथा जिटुजी माध्यमबाट खरिद हुने प्रक्रिया अगाडी बढेको जानकारी बिडारीले दिए ।
जिटुजीको खरिद प्रक्रिया आजै टुंगिने उनले बताएका छन् । त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा रहेको पिसिआर मेशिनलाई प्रदेश २ मा पठाउने निर्णय समितिले गरेको छ ।
२०७७ वैशाख ३ गते १९:३० मा प्रकाशित
कोरोना महामारी : यी २० देशमा नेपाली संक्रमित
भर्खरै आयो फेरि लिखित परीक्षाको थप नतिजा, यी हुन् सफल भएका उम्मेदवारहरु (नामावलीसहित)
बिहिबार सकेन,के आईतबार नेप्सेले १६०० को अंक भेट्ला ?
कात्तिक र मंसिरमा शाखा अधिकृतको विज्ञापन गर्ने, कुन पदमा कति संख्या माग ?
सेयर बजारमा उत्साहित भए लगानीकर्ता, १७.६१ अंकले बढ्यो नेप्से, कारोबार पनि बढ्यो !